Guriga - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
HADA KA BAX
Abaal marinno & Guul
Cidda aan u adeegno
Sida Caawimo Loo Helo
Soo bandhigida Agaasimaha Fulinta Cusub: Denise E. Conklin
Waxaan Diyaar U Nahay Buuxinta Guryaha
Waxaan halkaan u nimid inaan u adeegno bulshadeena. Kheyraadka weli waa la heli karaa.
SIDA LOO HELO CAAWIMO
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waxay siisaa caawimaad sharci oo bilaash ah dadka dakhligoodu hooseeyo ama dhexdhexaad yahay.
Khadka Ka Caawinta Khadka Tooska ah ee Guryaha 'Illinois'
Caawimaad sharci oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka degan Illinois ee wajahaya ka saarida suurtagalka ah
WAA MAXAY AAD U SHAQAYSAA?
Haddii aad u maleyneyso inaad xaq u leedahay inaad hesho caawimaad sharci oo bilaash ah si aad uga takhalusto xukunkaaga xashiishadda, dhagsii “Waxbadan Ka Baro” ama booqo newleafillinois.org si aad u bilowdo maanta!
Ku soo biir kooxdeena dagaalka si caddaalad siman loogu wada helo.
Waxa aannu ku samayn
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waxay bixiyaan bilaash adeegyada sharciga waayo, dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa jira 60 iyo wixii ka weyn oo halis ah dhibaatooyinka sharciga madaniga ah una baahan caawimaad sharci si loo xaliyo. Waxaa jira 11 xafiis xafiis oo u adeega 36 degmo waqooyiga Illinois.
Maalin kasta, dadka ku nool guud ahaan Illinois waxaa loo diidaa xuquuqda aasaasiga ah ee ay xaqqa ugu leeyihiin sharciga si fudud maadaama aysan awoodin qareen. Hadafkeenu waa inaan taa bedelno.
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waxay siisaa caawimaad sharci oo bilaash ah dadka aadka ugu baahan oo awooda ugu yaraan.
Helitaanka gargaarka sharciga ee bulshada wuxuu wax weyn ka beddeli karaa deriskeenna u dagaallamaya inay guryahooda joogaan, ka baxsadaan rabshadaha guriga, kaalmooyin ammaan ah oo loogu talogalay halyeeyada ama dadka naafada ah, ama wax ka qabtaan caqabado kale oo badan oo xagga sharciga ah oo taga wadnaha ammaankooda. iyo ladnaan.
Ku dhowaad 690,000 oo qof oo ku nool aagga adeegga ayaa ku nool saboolnimo. Waxay leeyihiin reero, rajo iyo riyooyin. Waa deriskaaga. Waxay ku nool yihiin bulshooyinka aad ugu yeerto guriga. Bulshooyinkeennu waa meel noo fiican dhammaanteen markii caawimaad la heli karo markii loo baahdo.
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
Waxaan u dabaaldegaynaa sannad-guuradii 45aad! In kasta oo ay wax iska beddeleen tan iyo markii la asaasay May 31, 1977, haddana halgankii aanu ku raadinaynay caddaaladda iyo soo celinta rajada ayaa sidii hore ahaa. #45 guurada #muhiimad	... Arag in dheeraad ahEeg Khariidad
Share on Facebook Share on Twitter La wadaag Khadka La wadaag Email
Raadi XAFIISKAAGA DEEGAANKA
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie kuma takoorto bixinta adeegyada iyadoo lagu saleynayo midab, midab, asal qaran, diin, jinsi, naafonimo, da ', nooca galmada, aqoonsi jinsi, ama astaamo kale oo sharcigu ilaaliyo.
Foomka Habka Cabashada
Foomka Cabashada Takoorka